ဂျပန်မှာချီးကျူးတဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ? - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာချီးကျူးတဲ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သူဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ?
လာ 21 Feb 2022, 16:45 ညနေ
စာဖတ်သူတို့အားလုံး “礼儀正しい” “ ရဲဂိတဒရှိ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကြားဖူးကြပါသလား?
ဂျပန်မှာတော့ တော်တော်လေးအဆင့်မြင့်ချီးကျူးတဲ့စကားဖြစ်ပြီး၊ အသွင်အပြင်ထက် အတော်လေးကို တန်ဖိုးထားခံရတဲ့အကဲဖြတ်စကားဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောကြပေမဲ့၊ 礼儀 “ ရဲဂိ” ဟာဘာလဲ ဆိုတာကိုသိကြပါသလား?
礼儀 “ ရဲဂိ” ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ဖော်ပြရရင် Manners、Courtesy、Etiquette တို့ဖြစ်ပါတယ်။
礼儀正しい “ ရဲဂိတဒရှိ” ဆိုပြီးအတွဲလိုက်ပြောရင်တော့ Polite ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ နီးကပ်ပါတယ်။
ဒီ 礼儀 “ ရဲဂိ” ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ၊ ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးမှာဖြစ်ဖြစ် အလွန်တန်ဖိုးထားခံရပြီး၊ သေသေချာချာလိုက်လျှောက်မယ်ဆို ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ ဂျပန်တစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘဲ၊ ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေ ချီးမွမ်းခံရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေသေချာချာလေး မှတ်ထားရအောင် …
၁။ ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းကို အလေးထားပြောဆိုခြင်း။
ကူညီပေးခြင်းခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ “ ကျေးဇူးပါ” ဆိုပြီး သဘာဝကျကျပြောဆိုဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
ဥပမာ ဟိုတယ်အခန်းစောင့်က အထုပ်အပိုးတွေကိုသယ်ပေးတဲ့အချိန်၊ “ ကျေးဇူးပါ” လို့ပြောကြပါသလား?
ဒါဟာ သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးလို့ တွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်ပေမဲ့၊ မိမိအားကူညီပေးသူကို တုံ့ပြန်တဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ ဟိုတယ်အခန်းစောင့်နေရာမှာ ရောက်နေခဲ့မယ်ဆို “ ကျေးဇူးပါ” လို့ပြောခံရရင် ဝမ်းသာမှာပဲမဟုတ်ပါသလား?
ဒီအပြင် ထမင်းဖိတ်ကျွေးခြင်းခံရပြီးနောက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကို မေးလ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ message ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ပေးပို့ပါရဲ့လား။ ဒါဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကအထက်လူကြီးဟာ ထမင်းကျွေးဖို့ခေါ်သွားတယ်။ မသွားချင်ဘူးဆိုရင်တောင် ကျေးဇူးတင်တဲ့သဘောကိုဖော်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အိမ်ပြန်သွားပြီးတော့မှ messenger မှာ “ごちそうさまでした” “ ဂေါ်ချိဆိုးဆမဒဲရှိတ” လို့ပြောပါရဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် နောက်နေ့မနက်ရုံးမှာ လူချင်းတွေ့ခဲ့အခါ “ごちそうさまでした” “ ဂေါ်ချိဆိုးဆမဒဲရှိတ” လို့ ပြောလိုက်ရုံနဲ့ သင်ရဲ့တန်ဖိုးက မြင့်တက်သွားပါတယ်။
ဒါကို နိုင်ငံခြားသားတွေကိုပြောခိုင်းရင် ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 敬語、尊敬語 ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ ထည့်သုံးပြီးပြောဖို့က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဖက်လူက မိမိထက်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရာထူးနိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ယဉ်ကျေးစွာတုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်တဲ့အကွာအဝေးရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ အကွာအဝေးနီးကပ်လွန်းရင် ရိုင်းပျတာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီး၊ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဆို တစ်ဖက်လူဖြစ်တဲ့အမျိုးသားက နားလည်မှုလွဲပြီး ပွတ်သပ်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဝေးလွန်းမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဖက်လူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့ အားနည်းချက်လည်းရှိပြန်ပါတယ်။
ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးလည်းဟုတ်သလို၊ စကားပြောဆိုပုံရဲ့ အကွာအဝေးဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ဒီအပြင်ခက်တာကတော့ တစ်ဖက်လူနဲ့လိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့အကွာအဝေးမတူကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် ကျွန်တော်ရဲ့ ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီကို DiSTANCE ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားပေမဲ့၊ ဒါဟာဂျပန်နဲ့ဗီယက်နမ်ရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ဧည့်သည်တွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့အကွာအဝေးကို မမှားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဂျပန်နာမည်ကြီး ကြော်ညာစာရေးဆရာဆီမှာ သွားမေးထားတဲ့နာမည်ပါ။
အွန်း…. ကျွန်တော်အတွက်လည်း တော်တော်လေးမကျွမ်းတဲ့အပိုင်းပါ။
ပျော်သည်ဖြစ်စေ ‌ဒေါသထွက်သည်ဖြစ်စေ ခံစားချက်တွေကို တော်ရုံတန်ရုံ ထုတ်မပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ပဲပြဿနာတက်တက် ခေါင်းအေးအေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပုံစံဟာ တကယ်အားကျစရာကောင်းတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ တစ်ဖက်သားအပေါ်ကိုယ်ချင်းစားစိတ်နှင့် စဉ်းစားပေးခြင်း။
လူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တတ်ပေမဲ့ တစ်ပါးသူရဲ့အမြင်မှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
ဘာသာရေးမှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကပဲ အကောင်းဆုံးဆိုပြီးတစ်ယူသန်ဖြစ်နေမယ်ဆို ဘာသာရေးစစ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းမှာလည်း ဘာသာရေးကနေစစ်ဖြစ်တာမျိုး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲကောင်းသည်ဖြစ်စေ တစ်ဖက်လူရဲ့နေရာကနေဝင်ကြည့်ပြီးတွေးပေးကာ အတင်းအကြပ်မလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်အတူတူလုပ်ကြတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ်သာသူ့နေရာမှာဆို ဒီလိုလေးလုပ်ပေးရင်ပျော်မှာပဲ ဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ ဇနီးမောင်နှံကြားက အဓိကပြဿနာကလည်း သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ထည့်မစဉ်းစားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယောက်ျား/မိန်းမမှမဟုတ် ဒီအချက်တွေရှိထားတဲ့လူဟာ စာရိတ္တပိုင်းမှာသဘောကျစရာကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသဘောကျစရာကောင်းတဲ့လူတွေ ကမ္ဘာမှာဆင့်ပွားများပြားလာခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီးလည်းငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သရဲတွေမှာ အထီးမဟုတ်ဘဲ အမကဘာကြောင့်များရသလဲ? ကျောက်ခေတ်ကသရဲ ဆိုပြီးမရှိတာ ဘာကြောင့်လဲ?